Nin lagu magacaabo Col. Mukhtaar oo dhawaan madaxweyne Yuusuf u magacaabay taliyaha ciidamada gobolka Hiiraan oo ku tilmaamay AlQacidda beelaha deggan galbeedka gobolka Hiiraan iyo beesha caalmaka oo wadda in ay dhex dhexaadiyaan labaga garab ee dowladda federalka ah ee Soomaaliya. Ruunkinet 31/12/06
Nin dhawaan madaxweyne Yuusuf u magaacabay taliyaha ciidanka gobolka Hiiraan laguna magacaabo Col. Mukhtaar ayaa la sheegay in uu billabay falal ka dhan ah qaar ka tirsan beelaha deggan galbeedka gobolka Hiiraan.
Col. Mukhtaar oo la sheegay in uu durbaba billaabay in uu ka qaato gaari mid ma mid ah dadka degan galbeedka magaalada Beledweyne ayaa wada abaabul uu ku doonayo in uu ku bara kiciya dad badan oo ku nool galbeedka magaalada Beledweyne inta ay ku sugan yihiin ciidada Itoobiya gobolka Hiiraan asagoo sheegay in ay dhammaan beelaha deggan galbeedka Hiiraan ka tirsan yihiin ururka AlQaacidda.
Dad badan oo ka tirsan beesha uu ka soo jeedo Col. Mukhtaar ayaa la sheegay in ay ka xunyihiin falalka uu ka wado magaalada Beledweyne sarkaalkaasi ayagoo ku tilmaamay in arrintan laga yaabo in ay keento dagaal beeleed ka dhaca gobolka Hiiraan.
Dhanka kale, wararka ka immaanaya magaalada Nayroobi ayaa sheegaya in beesha caalamka ay waddo dadaal ay isugu keenayaan labada garab ee dowladda ee ay kala hoggaamiyaan guddoomiyaha baarlmaanka iyo ra'isul wasaare Geeddi oo khilaafkooda siyaasadeed uu gaaran meel adag.
Dadaalkan ayaa la sheegay in lagu doonayo in ay wada hadallo isugu yimaadaan labada garab si ay uga wada hadlaan khilaafkooda siyasadeen in kastoo garabka uu hoggaamiya Shariif Xasan ay doonayaan in ay Itoobiya dalka ka baxdo.